Alshabaab oo qafaalatay wasiir ka tirsan K/Galbeed & mas'uuliyiin kale (Wararkii ugu danbeeyay) - Goobjooge.net: Somali News, Somalia news Analysis. Alshabaab oo qafaalatay wasiir ka tirsan K/Galbeed & mas'uuliyiin kale (Wararkii ugu danbeeyay) - Goobjooge.net: Somali News, Somalia news Analysis.
Kadib weerarkii saaka aroortii ay ALshabaab ku qaadeen degaanka Leego ee Gobolka Sh/hoose kuna qabsadeen xeradii ciidamada AMISOM oo qasaare baaxad weyn dhaliyay waxaa soo baxaya in mas’uuliyiin ka tirsan maamulka K/Galbeed iyo degaanka leego iyo waliba ciidamo kala duwan ay afduub ahaan u qafaasheen ALshabaab.
Inta la xaqiijiyay dadka ay Alshabaab qafaasheen ama la filayo inay u gacan galeen waxaa ka mida:
Guddoomiyaha degaanka Leego Col. Abuukar Alcadaala
Guddoomiye ku xigeenkii Leego Macalin Xasan Madyaale
Waxaa kaloo Alshabaab gacantooda lagu tebayaa inuu u gacan galay wasiirka maamulka K/Galbeed u qaabilsan Maleeshiyooyinka iyo hub dhigista Cumar Dheere.
Warar kale ayaa sheegaya in ciidamo ka tirsan kuwa Burundi ee AMISOM ay u gacan galeen Alshabaab, inkastoo aan la ogeyn tirada ciidankaasi iyo darajadooda, iyadoo AMISOM ka gaabsatay arrintan.
Qasaaraha ciidamada AMISOM kasoo gaaray dagaalkan ayaa la sheegay inuu sii kordhayo inkastoo ay ka gaabsadeen saraakiisha AMISOM haddana waxay qireen inuu jiro qasaare balaaran. Alshabaab ayaa tirada askarta ay dishay gaarsiisay ilaa 50.
Dowladda Federaalka Soomaaliya iyo Xafiiska Qaramada Midoobay ee Soomaaliya qaabilsan UNSOM ayaa soo saaray war saxaafadeedyo ay ku cambaareynayaan weerarka culus ee maanta Alshabaab ku qaadeen Leego. Waxaa kaloo war saxaafadeed soo saaray wakiilka Midowga Afrika u qaabilsan Soomaaliya Ambassador Maman Sidikou oo ka tacsiyadeeyay qasaarihii gaaray ciidamada Burundi ka socda ee AMISOM.
Previous articleSomalia attack: Al-Shabab ‘kills 30’ at AU military base
Next articleKHASAARE CULUS: In ka badan 70 askari oo laga dilay ciidamada Burundi & 20 maqan